Stay at Home ကြေညာချက်၊ ဥပဒေစည်းနှောင်အားနဲ့ ဒုတိယလှိုင်းရဲ့ ပကတိအခင်းအကျင်း - YOYARLAY Digital Media and News
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်-၁၉ လူနာ ၁ သိန်းပြည်ဖို့ ၈၄၅ ယောက်ပဲ လိုပါတော့တယ်။ Stay at Home ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ရတဲ့ မြို့နယ်စာရင်းကလည်း တိုးသထက် တိုးလာပါတယ်။ ဒုတိယလှိုင်း စတင်ချိန်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်က ပိုးတွေ့လူနာ အများဆုံးဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ရန်ကုန်၊ မန္တလေးမြို့ကြီးတွေမှာ ပိုးတွေ့လူနာ တွေ့ရှိမှုများလာလို့ မန္တလေးခရိုင်မှာပါ Stay at Home ကြေညာထားရပါတယ်။
မန္တလေးခရိုင်မှာ Stay at Home ကြေညာပြီးတဲ့နောက် လူအသွားအလာ သိသိသာသာ လျော့နည်းသွားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေက လူမှုကွန်ရက်ပေါ် ပျံ့နှံ့လာသလို ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အထင်ကရ နေရာတွေမှာလည်း ပုံမှန်သွားလာနေကျအတိုင်း လူစည်းကားနေတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ တွေ့နေရပါတယ်။ သင်္ကြန်ကာလ ပိတ်ရက်တွေအတွင်း ရန်ကုန်မြို့မှာ လူအသွားအလာ ရှင်းလင်းသွားခဲ့ပေမဲ့ Stay at Home ကာလ ကြာမြင့်လာချိန်မှာ အပြင်ထွက် သွားလာမှုလည်း မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့်လည်း တချို့တွေက ညွှန်ကြားချက်၊ အမိန့်၊ ကြေညာချက်တွေရဲ့ ဥပဒေအရ စည်းနှောင်အား အားနည်းမှုကို မချင့်မရဲဖြစ်နေကြပါတယ်။ ဥပဒေအရ စည်းနှောင်အားကိစ္စ ပြောရရင် ဒုတိယလှိုင်းအစတုန်းက ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေ လေကြောင်းခရီးနဲ့ ပြန်လာပြီး သက်ဆိုင်ရာကို ဆက်သွယ်ကြဖို့ ပျက်ကွက်ခဲ့သူတွေကိုလည်း သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ဥပဒေနဲ့ အရေးယူမယ်လို့ ကြေညာခဲ့ပေမဲ့ နောက်ဆက်တွဲ သတင်း ထွက်ပေါ်လာခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။
အခုနောက်ပိုင်းမှာ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ယနေ့အတွက် ဓာတ်ပုံကဏ္ဍဆိုတဲ့ အစီအစဉ်တစ်ခုကို Ministry of Health and Sports, Myanmar ဖေ့ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြနေပြီး ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါရဲ့ ကြောက်မက်ဖွယ် အနေအထား၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေရဲ့ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုတွေကို ဖော်ပြနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီအနေအထားကိုကြည့်ရင် ဥပဒေအရ မဖြစ်မနေ လိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့ အနေအထားမျိုးထက် ကိုယ့်အသိစိတ်နဲ့ကိုယ် လိုက်နာကြဖို့ပဲ ဦးတည်နေပုံပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ လူဦးရေထူထပ်များပြားလွန်းတဲ့ ရန်ကုန်မြို့မှာ အဲဒီနည်းလမ်းက အလုပ်ဖြစ်ရဲ့လားဆိုတာကိုလည်း ပြန်စဉ်းစားဖို့ လိုအပ်နေပါပြီ။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ရာပြည့်အထိမ်းအမှတ်မှာ လူတွေ စည်ကားသွားတဲ့ အခြေအနေမျိုးကို ပြန်သတိချပ်သင့်ပါတယ်။
ဒုတိယလှိုင်းရဲ့ ပိုးတွေ့လူနာဂရပ်ကိုကြည့်ရင် အခုချိန်ထိ ပိုးတွေ့လူနာတွေ့ရှိမှု ကျဆင်းသွားခြင်း မရှိသေးပါဘူး။ ကာကွယ်ဆေးအတွက် မျှော်လင့်ချက်ရောင်ခြည်သန်းလာပေမဲ့ ” လာမယ်၊ ကြာမယ်”လို့ ဆိုရဦးမယ့် အနေအထားပါ။ Stay at Home ကာလ ကြာမြင့်လာလို့ အပြင်ထွက်သူတွေ များပြားလာချိန်မှာ ” ကိုဗစ်ကို ထိန်းမှာလား၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ ပြန်ဖွင့်ပေးမှာလား တစ်ခုခုကို ရွေးပါ” ဆိုတဲ့ အသံတွေလည်း ကြားနေရပါတယ်။ ဒါဟာ လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ ဗျူဟာအတွက် အချက်ပြခေါင်းလောင်းသံပါပဲ။
Stay at Home ကာလ ဘယ်လောက်ကြာမြင့်ဦးမလဲ၊ ဘယ်သူတွေကရော ဘယ်အချိန်အထိ လိုက်နာနိုင်ကြဦးမလဲ၊ လမ်းပေါ်မှာ လူတွေများလာလို့ ပိုးတွေ့လူနာတွေ့ရှိမှု များလာခဲ့ရင်ရော ကျန်းမာရေးစနစ်အတွက် ဘယ်လောက်အထိ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး ထပ်ဖြစ်နိုင်မလဲ။ ရှေ့တန်းက ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကရော ဘယ်အချိန်အထိ တောင့်ခံနိုင်မလဲ။ ဥပဒေစည်းနှောင်အားမရှိရင် ကြေညာချက်တွေကို လိုက်နာသူ လျော့နည်းလာမလား . . . ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဒီမေးခွန်းတွေရဲ့ အဖြေကို ပကတိအခြေအနေမှန်နဲ့ ယှဉ်ထိုးသုံးသပ်ပြီး ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကို အမြန်ဆုံး တွန်းလှန်တိုက်ဖျက်နိုင်ဖို့ မျှော်လင့်လျက် . . . ။
Previous Previous post: ကမ္ဘာကျော် Youtuber နဲ့ ထိုးသတ်မယ်လို့ မေဝယ်သာ ကြေညာ
Next Next post: ၁၉ နှစ်အရွယ်မှာ ရခဲ့တဲ့ အကြံကနေ ၃ ၂ ဘီလျံတန်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်နိုင်ခဲ့ သူ